လိင်တူဆက်ဆံဘို့ဆုတောင်းကြလော့ | Apg29
- လိင်တူဆက်ဆံသူသည်အခြားအုပ်စုများထက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအများကြီးပိုဆိုးတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ သူတို့က, ဆေးလိပ်မသောက်မသောက်ရ, တစ် သာ. အတိုင်းအတာအထိမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအသုံးပြု type ကိုမိသားစုဆရာဝန်။
- နှစ်ကြိမ်လောက်ဂေးမီးခိုး သာ. နှင့် hashish ဆေးလိပ်မသောက်မသောက်ရပြည်သူ့ကျန်းမာရေး၏ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာန Institute ၏နှစ်စဉ်စစ်တမ်းအရသိရသည်ပျမ်းမျှဆွီဒင်နိုင်ငံသားတို့ထက်လေးဆပိုမိုမြင့်မားသည်။ အရက်ဆန့်ကျင်နယ်စပ်တွင်နေထိုင်လေးတစ်ခုမှာ, မိသားစုဆရာဝန်ရေးသားခဲ့သည်။
Read ကိုလည်း: ဂေးစှဲလမျးသူကပို
Vecka 26, tisdag 25 juni 2019 kl. 10:15